Ny tranofiara 'Jackass Forever' dia mitondra fihenam-bidy misimisy kokoa - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Jackass Forever' Trailer Mahatonga ny fihenan'ny toe-tsaina bebe kokoa
by Trey Hilburn III Jolay 20, 2021 1,017 hevitra
Tsy nieritreritra aho fa hiteny an'io foana…… Jackass ary ireo tovolahy mahaforona Jackass dia hiverina! Amin'ity indray mitoraka ity Jackass Mandrakizay.
Ny synopsis ho an'ny Jackass Mandrakizay mandeha toy izao:
Mankalaza ny hafaliana niverenana niaraka tamin'ireo namanao akaiky indrindra ary nitifitra tanteraka an'i dingdong, ilay ekipa jackass tany am-boalohany dia niverina ho an'ny fampisehoana hatsikana mahatsikaiky, tsy misy fotony ary mampidi-doza matetika miaraka amina fanampiana kely avy amin'ireo mpilalao vaovao mahafinaritra. Johnny sy ny ekipa dia manosika lavitra kokoa ny valopy amin'ny 22 Oktobra amin'ny jackass mandrakizay.
Tsy fantatro ny fomba tsy nahalavo an'i Johnny Knoxville sy ny ekipany rehetra ankehitriny. Ny tiako holazaina dia hoe, ny fahaverezan-tsaina ara-batana izay azon'ny vatany. Manampy ireo fa efa an-taonany maro no nanaovan'izy ireo izany. Toa tsy nihatony koa izy ireo. Ny tiako holazaina dia hoe, raha mijery ny ampahany amin'ilay tranofiara ianao rehefa mitondra omby iray manontolo ho an'ny tratra sy ny tendany i Knoxville dia mila manontany tena ianao hoe ahoana no mbola maha velona azy marina?
Mahafinaritra, moana izy io ary ireo tovolahy ireo dia nanatona ny ampahany lehibe tamin'ny kolontsaina pop sy ny fiainantsika… fa tianay izany na tsia.
Faly ve ianao amin'ny fizahana? Jackass Mandrakizay amin'ny 22 Oktobra? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.